Syria မှာ ကရာ‌တေးပညာကို စတင်ပို့ချခဲ့သူ (or) အရက်မူးနေတာတောင် လေးစားခြင်းခံရသူ !!!! - JAPO Japanese News
Syria မွာ ကရာ‌ေတးပညာကို စတင္ပို႔ခ်ခဲ့သူ (or) အရက္မူးေနတာေတာင္ ေလးစားျခင္းခံရသူ !!!!
ဂါ 07 Jul 2020, 9:44 မနက္
အိုကီနာဝါ ကနေစတင်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကရာတေး
လက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လိုက်စားလာကြသူတွေရှိပါတယ်။
ကစားသမားဦးရေ သန်း ၆၀ ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၈၇ နိုင်ငံအထိရှိလာပါတယ်.
တကယ်က ကမ္ဘာမှာ ဘောလုံးလောကထက်ကိုထိုးဖောက်လျက်ရှိတဲ့ အားကစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုကရာတေးကို Arab ရဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Syria မှာပျံ့နှံ့စေခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
သောက်ပြီးမူးယစ်ရမ်းကားကာ ကားမှန်တွေကိုရိုက်ခွဲ ပြီးနောက် လူအများရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံရတဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
岡本秀樹（おかもと　ひでき） Hideki Okamoto ဟာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ အသက် ၂၈ နှစ်မှာ ဂျပန်ပင်လယ်ရပ်ခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ် ဦးအနေနဲ့ Syria ကိုစေလွှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။
အသက် ၂၈ နှစ်၊ ကရာတေး သက်တမ်း ၁၂ နှစ်
သူ့ရဲ့ဓါတ်ပုံကိုတော့ ရှာမတွေ့တော့ပေမဲ့၊ 羽織袴Haori Hakama (ဂျပန်ရိုးရာအမျိုးသားဝတ်စုံ)နဲ့ 高下駄Takageta (ဂျပန်ဖိနပ်ခုံထူ) ကိုစီးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီး ဒီလိုဝတ်စုံနဲ့ပဲ Syria မြို့ထဲမှာသွားလာကျင်လည်ခဲ့ပုံရပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် မြင်တွေ့ဖို့အရမ်းကိုဟောင်းနွမ်းတဲ့ ဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်.
Syria လူမျိုးတွေအတွက်တော့ ထူးဆန်းတဲ့လူလို့အထင်င်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့….။
အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာ Syria ရဲသင်တန်းကျောင်းမှာ ကရာတေးကိုသင်ကြားပို့ချဖို့အတွက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ကရာတေးကိုလူသိပ်မသိသေးတဲ့အတွက် သင်တန်းသားတွေလုံးဝစုလို့မရခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီအချိန် Syria မှာ လက်ဝှေ့၊ နပန်း စတဲ့ကိုယ်ခံပညာကခေတ်စားပြီး သူ့အနောက်မှာလိုက်လာတာကတော့ ဂျူဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူ ၅၀ လောက်စုပြီး သင်တန်းကျောင်းဖွင့်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း ၃ ယောက်ကလွဲပြီး မစုမိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ လုပ်ချင်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေချည်းပါပဲ.
ဂျူဒိုကစားတဲ့နေရာကတော့ tatami တွေတောင်ခင်းပေးထားသော်လည်း၊ ကရာတေး သင်တန်းနေရာမှာတော့ ဘာတစ်ခုမှမရှိ ကွန်ကရစ်အတိုင်းသာကြီးပါ…..။
နောက်ပြီး သင်တန်းသားတွေက ဒီလိုပြောကြပါသေးတယ်။
“ ဟိတ်…မင်းအဖေကိုခေါ်လာခဲ့စမ်းပါ။ မင်း ကလေးသာသာပဲရှိပါသေးတယ်ကွာ?”
ကလေးမျက်နှာနဲ့ဆင်တူတဲ့ Okamoto ကိုပြောင်နှောက်ကျီစယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Okamoto ဟာ တစ်လကို 170 usd နဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလာလုပ်တဲ့အတွက်၊ သူဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ လက်ဘနွန်ကိုမကြာခဏသွားပြီး Arabs နဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကို ကရာတေးသင်ခန်းစာတွေကို အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ပါ သင်ပေးပါတယ်။
လက်ဘနွန်၏မြို့တော်ဘေရွတ်မှာကတော့ ဂျပန်ရဲ့အစားအစာဆိုင်တွေရှိလောက်အောင် ဂျပန်ရဲ့ယဥ်ကျေးမှုတွေရောက်ရှိနေပြီး ကရာတေးကိုလည်းကြားဖူးနားဝရှိထားပုံရပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းအလုပ်ကမိသွားပြီး Syria ရှိဂျပန်သံရုံးကနေ ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံရပါတယ်။
စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်က အခြေခံအားဖြင့် တိုင်းပြည်တွင်းကထွက်ခွာဖို့တားမြစ်ထားသလို အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဆိုတာကလည်း သေချာပေါက်ကိုတားမြစ်ထားတာပေါ့ ဆိုပြီး အဆူခံရကာ Okamoto တစ်ယောက် စိတ်ဓါတ်တွေကျခဲ့ပါတယ်။
တာဝန်ခံသံအမတ်ကလည်း Okamoto ကိုအရူးတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံပုံရပါတယ်။
ဒေါသထွက်လွန်းလို့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတုန်ရီလာပြီး တိုင်းပြည်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ အရက်တွေသောက်ပါတော့တယ်။
ဘီယာကိုစသောက်ပြီး, ARRACK လို့ခေါ်တဲ့‌ဒေသအရက်၊ ဝိုင်၊ ဝီစကီ၊ …….
ခါတိုင်းလို 羽織袴နဲ့ 高下駄ကိုစီးကာ အပြင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ကိုမပြန်ခင် သူ့ကိုပြောဆိုလုပ်ခဲ့တဲ့ တာဝန်ခံသံအမတ်ကိုထိုးမယ်ဆိုပြီး သံအမတ်နေထိုင်ရာအိမ်အထိသွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ Okamoto တစ်ယောက် လုံးဝကိုမူးနေတဲ့အချိန်ပေါ့။
သို့သော် သံအမတ်ရဲ့အိမ်ကိုမသိတဲ့အတွက် နာမည်ကိုအော်ခေါ်ရင်း “ ထွက်ခဲ့စမ်း” လို့ကြိမ်းဝါးနေတဲ့ Okamoto တစ်ယောက်
ကာယကံရှင်ကရှိမယ်ဆိုရင်တောင် ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်း တကယ်လည်းထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။
အတူတူစေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့ မြို့ပြရဲဌာနမှာ ဂျူဒိုနည်းပြဆရာအဖြစ်တာဝန်ကျတဲ့ 貞森裕（さだもり　ひろし）Sadamori Hiroshi ဟာ Okamoto ရဲ့အခြေအနေကိုထွက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
Sadamori-kun အဲ့ဒီလူရဲ့ကားက Blue Bird ဟုတ်တယ်မလာ?
ဆိုကာ Sadamori ကိုပြန်ပြီးအတည်ပြု စစ်ဆေးနေတဲ့ Okamoto ၊
ချက်ချင်းပဲ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ Blue Bird ဆိုတဲ့ကားအမျိုးအစားကိုတွေ့သွားပါတယ်.
အဲ့ဒီကားကိုတွေခဲ့တဲ့ Okamoto တစ်ယောက်ချက်ချင်း ကားမှန်ဆီသွားပြီး ကန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ဘန်း…! ဆိုပြီး အသံအကျယ်ကြီးမြည်သွားကာ မှန်ကွဲကျသွားပါတော့တယ်။
Sadamori-kun ငါ့ရဲ့ခွန်းအားတွေမကျသေးဘူးနော် !
ဆိုပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလို လိုက်ကန်ပြီး ပြတင်းပေါက်မှန်တွေအားလုံးကိုခွဲခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအသံကို ကြားသွားတာလား တစ်ယောက်ယောက်ကအကြောင်းကြားလိုက်တာလား?
ရောက်လာတဲ့ ရဲ ၃ ယောက်လုံးရဲ့မေးစေ့နေရာကို လှလှပပလေးပဲ ကန်ထည့်လိုက်တာ ရဲတွေအဲ့ဒီနေရာမှာတင် လဲကျသွားတယ်။
အဓိကရုဏ်းရဲတပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလာကြတော့ဘူးလာ !!!!
အချက်ပေးဥသြပေးသံကိုကြားလိုက်ရကာ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ truck တစ်စီးရောက်ချလာပါတယ်။
truck ကနေ လူ ၁၀ ယောက်ထက်မကရှိတဲ့ ရဲတပ်သားတွေ automatic rifle တွေကိုင်ပြီးဆင်းလာကြပါတယ်။
Okamura ဟာထိုးတယ်၊ ကန်တယ် ပြန်ပြီးခုခံတယ် အစွန်းကနေလဲကျသွားတယ်။
သို့သော် တစ်ဖက်လူဟာလည်း သေသေချာချာလေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ရဲတပ်သားတွေဖြစ်သလို၊ အဓိကရုဏ်းအတွက် ရဲတွေဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအတော်လေး ကြံ့ခိုင်ကြပါတယ်။
တန်ပြန်ချခြင်းခံရပြီး Okamoto တစ်ယောက် သတိလစ်သွားပါတယ်။
နောက်နေ့ Okamoto ဟာ သံရုံးကနေဆင့်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
သံအမတ်ကြီးက ဒေါသတွေအရမ်းထွက်ကာ ဂျပန်ကိုပြန်ဖို့ အမိန့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။
Okamoto ဟာတိုင်းပြည်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အဆင်ပြေပေမဲ့၊ သူလုပ်ခဲ့တာအရမ်းများသွားတယ်လို့နောင်တရပြီး ရဲသင်တန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီ တောင်းပန်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။
အသေအလဲအထိုးခံထားရပြီး ဘယ်သူမှန်းမသိအောင်မျက်နှာရောင်ကိုင်းနေတဲ့ Okamoto ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို တောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး တိုင်းပြည်ပြန်ပါတော့မယ်။ မနေ့ကအရမ်းလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
သံအမတ်ဆီကနေ ပြန်တော့လို့ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ခုကနေစပြီးတိုင်းပြည်ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့မယ်။
ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ ARRACK ၊ ဝီစကီ၊ နောက်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးခင်ဗျာ။
ဟုတ်လား၊ အရက်ဆိုတာ ရောပြီးသောက်လို့မရဘူး။ မင်းလို့မထင်ရလောက်အောင် တော်တော်လေးဆိုးခဲ့တယ်။
အရက်ကြောင့်လို့ပြောပေမဲ့၊ သောက်တာကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မဟုတ်လား..
လို့ပြောပြီး ပြန်မယ်လို့လုပ်နေတဲ့ Okamoto ကို ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကကိစ္စဟာ အတွင်းဝန်ကြီးဌာနအထိ သတင်းတွေတက်သွားပြီး။ ဒါကြောင့်
ကရာတေးဟာ အမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးချနိုင်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
မင်း ရဲသင်တန်းကျောင်းမှာ ကရာတေး သင်ကိုသင်ပေးရလိမ့်မယ်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကနေ ဂျပန်သံအမတ်ဆီကို အကြောင်းကြားထားပြီးပြီ။
ငါတို့တော့ စာချုပ် ၃ ခုကိုချုပ်ထားတယ်။
၁။ Okamoto ဟာ အခုကနေစပြီး မူးယစ်ရမ်းကားမယ်ဆိုလည်း ဂျပန်သံရုံကတာဝန်ယူစရာမလိုတော့ဘူး။
၂။ ကိစ္စတွေပြီးတဲ့နောက် တိုင်းပြည်ပြန်ရင် ကုန်ကျစာရိတ်ကို Syria က အကုန်ကျခံမယ်။
၃။ Okamoto က အခုကနေစပြီး ဂျပန်သံရုံကိုအနှောက်အယှက်မပြုဘူးလို့ ကတိပေးရမယ်။
Okamoto ရဲ့ကရာတေးကျောင်းဟာလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သလို …
တပည့်တွေဟာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လူ ၁၀၀ လောက်များလာပါတယ်။
နောက်ပြီး နောက်နှစ်၊ hong kongရုပ်ရှင်မှာ Bruce Lee (ブルース・リー) ကသရုပ်ဆောင်ပြီး၊ ကရာတေးဟာ နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတော့တယ်။
သူကတော့ ကွန်ဖူးပညာဖြစ်ပြီး ကရာတေးမဟုတ်သော်လည်း…..
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ..ကရာတေးဆော့တဲ့နေရာမှာ ကရာတေးနတ်ဘုရားကိုစီးပူးတဲ့ နတ်ကွန်းလေးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံးဦးညွှတ်ပြီးမှ အထဲဝင်ရတာဖြစ်လို့ အာရပ်လူမျိုးတွေအတွက် ဦးညွှတ်ရမှာက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့် အခက်အခဲလေးရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် သူတို့ သေသေချာချာလေးဦးညွှတ်ခဲ့ကြပုံရပါတယ်။
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေထက် လက်တွေ့အရည်အချင်းကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ Syria လူမျိုးတွေပါပဲ..
အကယ်၍ ဂျပန်မှာသာဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့ရင် အကြမ်းဘက်မှုအဖြစ် ကရာတေးဟာ ပိတ်သိမ်းခြင်းခံရမယ်မဟုတ်လား..
တကယ်အနှစ်သာရကို ထိုးဖောက်မြင်တတ်တဲ့ အာရပ်လူမျိုးတွေရဲ့ အမြင်ဟာတိကျသေချာနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးအခွဲခံလိုက်ရတဲ့ Blue Bird ကြီးက ၊ တကယ်တော့ ဘရာဇီးသံရုံးဝန်ထမ်းရဲ့ ကားပါ….
Okamoto ဟာလစဉ်ဒေါ်လာ ရာနှင့်ချီလျော်ကြေးပေးပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ငွေပေးခဲ့ပါတယ်။
အေမရိကန္ရဲ႕အမ်ိဳးသားသီခ်င္းကို အမိုက္စား ROCK ဂီတနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ ဂ်ပန္သံအမတ္ !!!!!
စည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ပညာေရးကိုျမင့္တင္ခဲ့သူ
ႏွစ္ ၈၀ ၾကာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕တရားဝင္ေတာင္းပန္မႈနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္ !!!!!
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေသဒဏ္ေပးျခင္း စနစ္
ဂ်ပန္ေထာင္သားေတြရဲ႕ ဘဝက ဘယ္လိုလဲ ? ?
ဖုံးကြယ္ခံလိုက္ရတဲ့ အမွန္တရား။ Petit Angel Case !!!
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့အဝတ္!! ေျပာင္းလဲလာတဲ့ antibacterial ကုန္ပစၥည္း !!!
Rugby ေဆာ့တဲ့ လူသန္မာႀကီးေတြျဖစ္ေပမဲ့ စိတ္ဓါတ္ကေတာ့ ေလးစားစရာ!!!
အေကာင္းစား Camper ကားမပိုင္ဆိုင္ရရင္ေနပါေစ။ သူ႔ကိုပဲစိတ္ႀကိဳက္ျပန္ျပင္ဆင္ၿပီး ကို႐ိုနာကိုေက်ာ္ျဖတ္မယ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ lockdown ခ်လိုက္ရင္ဒုကၡေရာက္မည့္သူ ၄၀၀၀ ‌ေလာက္ရွိ !!!!
ႀကိဳက္သေလာက္စား အဆီမတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္း !!!
ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ passport အသစ္က ??
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ဘဝတြင္ “ မည္သို႔ေသဆုံးပုံ” သည္အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။